Fifamoivoizana : Efa lasa kolontsain’ny gasy ny gaboraraka | Ny Valosoa Vaovao
Fifamoivoizana : Efa lasa kolontsain’ny gasy ny gaboraraka
par gvalosoa | Sep 10, 2017 | Edito |
Ilaina ny fahafantarana ireo voakasik’ity resaka fifamoivoizana ity no fakafakaina. Tsy ny fiara ihany mantsy no mifanaretsaka fa eo koa ny olona izay samy manana ny ataony ka mifamezivezy eny an-dàlambe rehetra eny. Raha ny eto Antananarivo Renivohitra manokana no jerena dia maro ny fifanoherana mitranga ka tsy fantatra intsony izay manana ny rariny sy ny hitsiny ary tsy hay intsony koa, iza marina no tsy te-hanara-dalàna, sa misy tokoa ny didy jadona apetraky ny fiadidiana ny tanàna. Ny zava-misy iainan’ny mponina an-davanandro dia azo itarafana fa toa tsy misy lalàna mifehy ny fifamoivoizana intsony eto amin’ity Renivohitra ity. Samy manana ny toerana na faritra tsy maintsy diaviny na iantsonany na hamelarany entam-barotra anefa na ny olona na ny fiara na ny mpivarotra. Raha jerena ny any amin’ireo tanàn-dehibe rehetra manerana an’izao tontolo izao dia milamina sy mirindra tsara izany fifamoivoizana izany. Ny eto Madagasikara kosa dia efa lasa kolontsain’ny gasy ny tsy fanajàn-dalàna ka raha vao misy lalàna apetraka hampiharina ho fandaminana dia tsy maintsy misy hatrany ny mijoro hanohitra izany. Raha ny marina dia ny manampahefana ambony eto amin’ny firenena no modely halain-tahaka kanefa dia ny mpitondra mihitsy no tsy mampihatra ny lalàna izay izy ihany no mamolavola azy ireny. Porofo iray tsy azo hamaivanina ny resaka Lalàmpanorenana izay hodian’ny manampahefana tsy hita na dikainy mihitsy ireo andininy sasantsasany izay manohintontohina ny fahefany na hiteraka fanozongozonana ny sezany sy hanapaka ny fahazoany tombontsoa. Ny mponina kosa izay mizara ho saranga vitsivitsy, an-kilany, dia mihevitra mandrakariva fa manana ny zony izay tsy azo tohintohinina. Voalohany amin’izany ny mpivarotra amoron-dàlana izay tsy miraharaha ny hafa ka miketrika ny hevitra sy ny fomba rehetra halafosany ny entam-barotra na aiza toerana hahafahany manao izany, na eny ampovoan’ny arabe izay voafaritra ho an’ny fiarakodia, na eny amin’ny sisin-dàlana (trottoire) izay natokana ho an’ny mpandeha an-tongotra. Rehefa mamoaka lalàna ny fiadidiana ny tanàna mba hifampifehezana sy handrindrana ary fampidirana ny mpivarotra eo amin’ny sehatry ny ara-dalàna dia tsy maintsy misy manohitra na eo amin’ny fandaniana azy eo anivon’ny filankevitry ny tanàna na ny fampiharana izany eny an-tsena. Tsy misy afaka mandà fa misy ambadika politika hatrany ireny hetsika ireny. Ny manohitra dia tsy te-hahalala ka manambara fa tsy misy fitsinjovana ny madinika na jadona ny fampiharana ny lalàna. Eo amin’ny fandaniana ny lalàna indray dia tsy maintsy ao an-tsaina mandrakariva ny fifampifehezana ara-demokratika izay mampivoitra ny tsy maintsy haneken’ny vitsy an’isa ny fanapahan-kevitry ny maro an’isa kanefa manana zo hametraka “reserve” amin’izany iretsy voalohany fa tsy manentana ny ankolafin’olona hampiharana ny lalàna hanao hetsika. Tsy ny fialangalanana sy ny tsy fanatrehana ny fandaniana ny lalàna no manala ny andraikitra amin’izany satria tsy maintsy havoitra ao anatin’ny fitanana an-tsoratra ny anton’ny fandavana. Ny faharoa dia ny mpanjifa izay manana toetsaina mitady ny vahaolana mora indrindra (solution de facilité) ka izay mampetipety ny fiainany no hataony fa tsy mihevitra izay hampirindra sy handamina ny fiarahamonina. Ny fahatelo dia ny mpamily fiarakodia izay amin’ny ankapobeny dia mametraka ny fiarany amin’ny toerana rehetra hitany fa malalaka (n’importe où) sy amin’ny fomba rehetra mampilamina azy (n’importe comment).
Tena mahalasa saina tato anatin’ny volana vitsivitsy dia ny toetsain’ireo mpitatitra izay manohitra ny lalàna sy fepetra mitsinjo, tsy ny firindran’ny fifamoivoizana sy ny fikojakojana manara-penitra ny fiara ary ny ain’ny mpanjifa ihany, fa indrindra indrindra ho fanilihana ireo mpitatitra tsy ara-dalàna ihany koa. Iaraha-mahatadidy ny fisian’ny “papango” tamin’ny fotoan’andro izay antony nandraisan’ny fiadidian’ny tanànan’Antananarivo fepetra momba ny loko mampiavaka ireo fiara fitateram-bahoaka tsirairay sy ny loko tokana ho an’ny firakaretsaka. Tsy zoviana amin’ny rehetra fa ny tsy fahatomombanan’ny lafiny teknika no maha be ny lozam-pifamoivoizana sy miteraka fitohanana etsy sy eroa. Raha nandray fepetra momba ny fitsirihana ara-teknika (contre visite technique) ny fiadidiana ny tanànan’Antananarivo dia tsy ny sampan-draharaha hanao izany no itondrana fanakianana na fanoherana mihitsy fa tsy maintsy banjinina ny ho avy na hitondra fivoarana ho amin’ny tsaratsara kokoa ny fanapahan-kevitra na tsia. Raha ny resaka fiantohana indray dia samy mandoa izany na ny mpitatitra na olontsotra manana fiara. Ny olontsotra dia enim-bolana fara-fahakeliny no tsy maintsy aloa, tsy mampidi-bola anefa ny fiarany fa mandany vola aza. Rehefa nirotsaka tamin’ny sehatry ny fitaterana ny ankolafin’olona nirona tamin’izany dia tsy maintsy manaraka ny lalàna mifanaraka amin’izany satria raha ny vola aloan’ny olon-tsotra amin’ny saram-piantsonana fotsiny no dinihana dia tsy araky ny fahefana ara-bola velively kanefa tsy izay no entina hitakiana ny fanafoanana ny lalàna mifanaraka amin’izany satria maneran-tany dia misy izany ary manaiky ny mpampiasa azy ireny. Tsy maintsy misy ny lalàna ifampifehezana, raha tsy izany dia ho fanjakan’ny baroa no iainana ka tsy ho azo tohaina ny fitsaram-bahoaka.